VaTsvangirai Vanoti Sarudzo Ngadziitwe Kuitira Kupedza Bopoto Munyika
Nyamavhuvhu 19, 2010
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai neChina vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze uye vemasangano akazvimirira oga vachivasumawo zvakabuda kumusangano weSADC wakaitirwa muWindhoek, kuNamibia. Musangano uyu wakepera neChipiri.
VaTsvangirai vanonzi vaudza vamiriri venyika dzekunze nevemasangano anoshanda akazvimirira oga pamusangano waitirwa pamuzinda weMDC, paHarvest House kuti hurumende yavamunzira yokuenda kusarudzo zvichitevera musangano weSADC uyo wakakurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena.
Mutungamiri weSouth Africa, uye vari mutongi gava pagakava riripo pakati pemapato ezvematongerwo ari muhurumende, vanonzi vakaudza musangano weSADC kuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dziri pachena uye kupedza misariridzwa yose iri muhurumende yemubatanidzwa mukati memwedzi mumwe chete. Sarudzo dzinoitwa mushure mekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC, VaElphas Mukonoweshuro, vaudza Studio7 parunhare kuti VaTsvangirai vati Zimbabwe yakatarisirwa neSADC kuita sarudza dziri pachena.
VaMukonoweshuro vati VaTsvangirai vaudza vamiriri venyika dzekunze kuti hurumende ine hurongwa hwekuvandudza gwaro rine mazita evavhoti, kana kuti voters roll pamwe nekutara miganhu yematunhu sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvinonzi Va Tsvangirai vati komisheni inoona nezvesarudzo inofanira kushanda zvakasimba kuitira kuti inge yagadzirira zvose zvinodiwa kuitwa panokwana nguva ichaitwa sarudzo.
Zvinonzi VaTsvangirai vaudza vamiriri venyika dzekunze kuti kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika kukapera, uye referendamu ikaitwa, nyika inenge yava kuenda kusarudzo sezvo vachiti hurumende yemubatanidzwa iri kungofanobata matomu kwakamirirwa sarudzo dziri pachena.
VaTsvangirai vanonzi vati misariridzwa iri muhurumende yemubatanidzwa inofanira kugadziriswa nechimbichimbi mukuzadzisa zvakabuda mumusangano weSADC Summit.
VaMukonoweshuro vati nyaya yezvirango zvakatemerwa VaMugabe nevamwe vavo vari muhurumende, haina kutaurwa mumusangano waitwa naVaTsvangirai nevamiriri ava, asi mumwe mumiriri wenyika yekumavirira asina kuda kudomwa nezita audza Studio7 kuti nyaya yezvirango izvi yataurwa kwenguva dikidiki mumusangano uyu.
Zvinonzi VaTsvangirai vaudzwa nevamiriri ava kuti zvirango izvi hazvisi kuzobviswa kusvikira hurumende yazadzikisa chibvumirano chezvematongerwo enyika cheGlobal Political Agreement.
VaMugabe vanoti zvirango zvavakatemerwa zvinofanirwa kubviswa, ukuwo MDC ichiti mubati wehomwe yayo, VaRoy Bennett, vanofanira kugadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekurima.
MDC iri kugunun’una zvakare nekugadzwa zvisiri pamutemo kwakaitwa gavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe negweta guru rehurumende, VaJohannes Tomana.
Asi mutevedzeri wemutungamiri wehurumende VaArthur Mutambara, vashora MDC yaVaTsvangirai vachiti haisi kureva chokwadi panyaya yezvakabuda mumusangano weSADC uchangobva kuitwa.